Izici, indawo kanye nezinganekwane ze-constellation Cassiopeia | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuqhubeka nomhlaba othakazelisayo we izinkanyeziNamuhla sizohlaziya umlando nezici zomunye wezidume kakhulu enyakatho Nenkabazwe. Ingabe mayelana ICassiopeia. Kuyinkanyezi equkethe izinkanyezi ezi-5 ezikhanya kakhulu kunezinye futhi ezinesimo esiphindwe kabili se-V (W). Inokuthile okukhethekile uma sikuqhathanisa namanye amaqoqo ezinkanyezi esibhakabhakeni. Futhi ukuthi ukuma kwayo kuyehluka kakhulu kuye ngesikhathi sonyaka nobubanzi esibubonayo.
Kulesi sihloko ungathola izimfihlo ezijule kakhulu zenye yezinkanyezi ezaziwa kakhulu emhlabeni. Ngabe ufuna ukwazi imvelaphi nomlando weCassiopeia? Qhubeka ufunde ukuthola konke.
2 Indawo kaCassiopeia esibhakabhakeni sasebusuku
3 Umsuka Nezinganekwane
4 Isipoki seCassiopeia
I-International Astronomical Union isungule izinkanyezi zesimanje ezingaba ngu-88 kanye nezinye izinkanyezi ezingama-48 zamaPtolemaic. Kusuka kulezi zinkanyezi eziningi, ICassiopeia ingenye yezinto ezaziwa kakhulu futhi ezibaluleke kakhulu Kokubili ukuqashelwa kwayo esibhakabhakeni kanye nomsuka nezinganekwane ezingemuva kwayo.
Yenziwe izinkanyezi ezi-5 ezikhanya kakhulu kunezinye futhi isondele impela enyakatho yezulu lamazulu. Emazweni amaningi asenyakatho yezwe, singabona iCassiopeia ubusuku bonke. Ngenxa yokubukeka kwayo, ingakhombisa isimo sezulu esingesihle kwezinye izindawo.
Uye ukwakheka kwe-W okuguqukayo kuya ngendawo esiyibuka ngayo nesikhathi sonyaka esikuso. Noma kunjalo, hlonipha ngaso sonke isikhathi leso sakhiwo se-W.
Phakathi kwezinkanyezi zayo eziyinhloko sithola:
α - ISchedar, 2.2, uphuzi. Igama lale nkanyezi lisho isifuba.
C - UCaph, 2.3, omhlophe. Igama layo livela egameni lesi-Arabhu futhi likude ngeminyaka engu-46 elula.
Ci - UCih, cishe u-2.5, omhlophe okwesibhakabhaka. Le nkanyezi iyona evusa ilukuluku elikhulu phakathi kwabalandeli bezinkanyezi. Futhi ukuthi igama lalo alaziwa ngokuphelele futhi linobukhulu obuphakathi kuka-3.0 no-1.6. Abanye ososayensi bacabanga ukuthi ijubane elinalo ekuphendukezeni kwalo liyenza ingazinzi kahle futhi yingakho ukukhohliseka kwamasongo egesi kungabonakala.
Indawo kaCassiopeia esibhakabhakeni sasebusuku
Sizokwazi ukuthi singayithola kanjani le nkanyezi esibhakabhakeni ebusuku. Ukuba yinkanyezi eyisiyingi (lokhu kusho ukuthi izohlala isendaweni ephakeme enyakatho Nenkabazwe), singabona ukwakheka kwayo okungenakuphikiswa kweW.Ingatholakala ngendlela elula, ngoba isendaweni ephikisanayo ne IBhele Elikhulu ngenhlonipho ku Inkanyezi. IBig Dipper kulula kakhulu ukuyikhomba yodwa, yingakho, lapho uyibona, ngakho kufanele sibheke nje enye indlela ukubona i-W lokho kuzosikhombisa ukuthi iCassiopeia ikuphi.
Isikhungo sale nkanyezi sinokwehla okucishe kube ngu-60 ° N nokukhuphuka kwesokudla kwehora elilodwa. Uma ubona iCassiopeia ungathola nePole Star, ngoba iseduze nephuzu lapho ama-bisectors womabili akha i-W intersect. Le ndlela yokuthola iCassiopeia nePole Star ibalulekile ekuzulazuleni ngoba ikhombisa iNyakatho yeqiniso ngokunemba okwanele. Ngaphezu kwalokho, ubude obujwayele ukuba nabo ngaphezu komkhathizwe ngokuvamile buqondana nobubanzi lapho obukele ekhona.
Umsuka wale nkanyezi ungalandelwa emuva kwinganekwane yeNdlovukazi uCassiopeia nempilo yakhe engeyinhle. Wayengunkosikazi weNkosi uCepheus waseJopa futhi wayenendodakazi egama linguAndromeda. Bobabili babengabesifazane abahle, kangangokuba iNdlovukazi uCassiopeia yenza isono se qinisekisa ukuthi yena nendodakazi yakhe babebahle kakhulu kunezinyoni zasolwandle eyaziwa ngokuthi amaNereids. AmaNereid kwakungamadodakazi esihlakaniphi esasihlala olwandle okuthiwa yiNereus.
Lapho amaNereid ezwa ngeCassiopeia ukuthi mahle kakhulu kunawo, acasuka futhi aya ePoseidon ukuyoziphindiselela. UPoseidon akazange ahlale kahle nezitatimende ezinjalo futhi wasebenzisa itrident yakhe ukukhukhula wonke amazwe asogwini lwasePalestine. Ngaphezu kwalokho, wafona monster Cetus ukuhlasela kusukela ekujuleni.
Ngakolunye uhlangothi, uCepheus waxhumana nesiphicaphicwano sika-Amun ukuthola ukuthi angabasindisa kanjani abantu bakhe. Ukuphela kwendlela kwaba ngokunikela ngendodakazi yakhe u-Andromeda eCetus. Ngenxa yalokhu, u-Andromeda wayeboshwe ngamatshe asogwini lwaseJopa. Lapho uCetus embona eboshwe ngamaketanga wayomhlasela, waqhamuka Perseus ukulwa naye ngokushintshana nesandla sikaAndromeda.
Kamuva, lapho kwenzeka umshado phakathi kukaPerseus no-Andromeda, uPineus, owayeyisikhonzi sasendulo esasinomona kakhulu seCassiopeia, wavela. Wayala ibutho lamaqhawe angama-200 elwa noPerseus futhi lena, yakhipha ikhanda elanqanyulwa lemedusa ukwethusa wonke amaqhawe.
Ekugcineni, njengesijeziso sakho konke okwenzekile, uPoseidon wabeka uCassiopeia esimweni esingahloniphekile nesingakhangi ezulwini.
Lokho okubizwa ngokuthi yisipoki seCassiopeia kungukuthi i-nebula que kukude ngeminyaka engu-550 ukukhanya. Inokukhanya okungatheni futhi iyahlangana nokuvela kwesipoki esijwayelekile lapha eMhlabeni. Kwakhiwa ngamandla ezinkanyezi ezibilayo ezikhipha la magesi awuketshezi nothuli olwakha lokhu kubukeka okunelukuluku.
Ukugqama nokuma kwayo kufana nokwefu elifana nelamacala ajwayelekile. Noma kunjalo, ukwakheka kwaleli fu legesi nothuli yi-hydrogen iqhutshwa njalo yimisebe ye-ultraviolet ekhishwa yinkanyezi enkulu eseduze eluhlaza okwesibhakabhaka ebizwa ngeGamma Cassiopeiae. Lokhu kukhishwa kwemisebe kubangela inkanyezi ukuthi ikhanye ibomvu futhi ingxenye eluhlaza okwesibhakabhaka ibonakalise ukukhanya okuvela othulini lwe-nebula.
Le yingcazelo yesipoko esidumile seCassiopeia. Kodwa-ke, ukuze usibone udinga isibonakude esinamandla kakhulu okungekho kubo bonke abantu abakwazi ukufinyelela kuso.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi uthole okuningi mayelana ne-constellation Cassiopeia nawo wonke umlando wawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Umlaza iCassiopeia